Creative Writing » တမနက်တာ ရုံးသွားရာတွင်….	20
ခင်ဇော် says: Coffee….??
တိမ်မည်း says: ကျေးကျေး အမ..
kyeemite says: .ကိုတိမ်မည်း စာရေးကောင်းသားပဲဗျ…မဖတ်ရတာတောင်အတော်ကြာပီ
.ရုံးအသွားလေးနဲ့တင်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ရော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ကိုရင်တိမ်မည်း တမနက်တာ ရုံးသွားလိုက်တာ ကျောက်စ် အတိတ်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်…
kai says: ပျားဂေဟာစီမံကိန်းနဲ့ ကြက်ကြော် ငုံးကြော်ဆိုင် ဖွင့်ဖူးသေးတယ်ပေါ့…
ထင်တာပြောတာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: အဟဲ… သဂျီး အတိတ်မေ့ပြီ…
kai says: မျက်မျက်ကြီးတင်ဦးကို. ဘိုနေ၀င်းကရှင်း..
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဘတ်​စ်​သိုင်း.. ဟုတ်​တယ်​.. ကား​တွေက လူတင်​ဖို့သာ ​ကျောက်​ချရပ်​တာ ဆင်းဖို့ဆို အီနားရှားနဲ့ ဆင်းရတာ.. ဒါ​တောင်​ ကြားမှတ်​တိုင်​​တွေဆို ခုန်​တက်​ ခုန်​ဆင်းပဲ.. ခါးက​နေ လှမ်းဖက်​ပြီ ထိန်း​ပေးတာလည်း ​အောင့်​သက်​သက်​နဲ့ ခံရ​သေးတယ်​.. မဟုတ်​ရင်​လည်း လဲ​တော့မှာကိုး.. ရန်​ကုန်​မှာ ဘတ်​စ်​ကားစီးရတာ တကယ်​ အကုသိုလ်​များတယ်​…
ဗုံဗုံ says: ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကား ကို မစီးဖူးလို့ စီးကြည့်ချင်လိုက်တာ…..
ဘတ်စ်ကားစီးဖို့ ရန်ကုန်သွားအုံးမှ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: Toyota Service ဘေးက တီးဆိုင်လေးမှာ လီမွန်တီးလေးသောက် COC လေးဆော့ရင်း ရုံးချိန် အား စောင့်မျှော်လျက်…
အဲ့အချိန် တဒင်္ဂလေးမှာတော့ လောကကြီးဟာ ရှုချင်စဖွယ်ဖြစ်နေမှာ မုချ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 579
တိမ်မည်း says: kyeemite> ကျေးဇူး ဦးကြီးမိုက်…
ဦးကျောက်ခဲ> ဦးကျောက်ခဲ အတိတ်က ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်… :D
လုံမလေးမွန်မွန်> ဘက်စ်သိုင်း ကျွမ်းနင်းကီးတယ်ပေါ့… စပယ်ယာတွေရဲ့ ခါးဖတ်သိုင်းကတော့ မပြောတော့ဖူး… စပယ်ယာတိုင်း မတက်မနေရများ တင်ထားသလား အောင့်မေ့ရတယ်… အဘွားကြီးကျ ဂျိုင်းကနေ စွေ့ ကနဲ … ကောင်မလေးများကျတော့ ခါးကနေ စွေ့ ကနဲ …. ဗုံဗုံ> လာခဲ့လေ ရန်ကုန်… ဘက်စ်ကား ပတ်စီးကြည့်ပေါ့… မစီးခင် ဘက်စ်သိုင်းအရင်သင်ခဲ့….
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ကော်ဖီဖြစ်ဖြစ် လက်ဖက်ရည်ဖြစ်ဖြစ်
တိမ်မည်း says: သိပ်မှန်တာပေါ့ဗျာ….
တောတွင်းပျော် says: ကျနော် ရန်ကုန်ရောက်ရင်
uncle gyi says: ကိုတောပျော်ကကိုတိမ်ကိုသင်ခိုင်းနေ
Kaung Kin Pyar says: . ကိုတိမ်မည်းရဲ့ ဘတ်စ်သိုင်းကို အရောက်….ရုံးမှာ ဟန်တောင်မဆောင်နိုင်ဘဲ ခွီးကနဲ ဖြစ်သွားပါကြောင်း…
padonmar says: အန်တီလည်းအဲဒီ ဘတ်စ်သိုင်းတတ်ပါတယ်။
မြစပဲရိုး says: အော ဒီမှာလဲ နော်ဝေးဘုရင် အလာ လမ်းရှင်းထားတယ်လား။
Crystalline says: မင်းလမ်းဆိုလို့..စမ်းချောင်းမင်းလမ်းထင်နေတာ.. ပုလဲကွန်ဒိုနားကကိုး… ဘတ်စ်ကားချောင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာနေရတာကိုက နည်းတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး..
စကားမစပ်..ငုံးကြော်စားချင်ထှာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4812
မွသဲ ( 17082011 ) says: ဟမ်မလေး တိမ်မည်းကလမ်းကိုမနဲပဲလျောက်ရတာပါလား။ နဲတဲ့အဝေးကြီးမဟုတ်ဖူး။ နေ့တိုင်း အောင်မယ်လေး မောထှာ